tamin’ny lalao miverina hahafahana miatrika ny fifaninanam-bondrona CHAN 2020 hotontosaina any Cameroun tamin’ny sabotsy 19 oktobra teo tany amin’ny kianja iray any Windhoek. Baolina matin’ny Namibiana teo amin’ny minitra faha-11 sy minitra faha-48 no nanakana ny dian’ny Barea Chan Malagasy. Tsy hain’ny mpilalaon’i Franklin no nihazona ny tombon’isa efa azo taty amin’ny lalao mandroso. Na inona ho filaza na inona dia nihintsana indray aloha ny Barea. Azo heverina fa mila manatevina fahalalana mikasika ny “Football total” izay hampiharin’ny ekipa rehetra maneran-tany ankehitriny ireo mpanazatrantsika mihondinkondina manazatra an’io Barea io fa tsy ho variana amin’ny kitikitika Breziliana mahavalalanina fotsiny sy ny famerenam-baolina any aoriana matetika. Tokony hifantohan’ny fanazarana ihany koa ny famonoam-baolina antoky ny fahatafitana amin’ny fifaninanana.